သီတဂူဆရာတော်ကြီး – သစ္စာပါရမီ ဓမ္မရာဇာ တရားရိပ်သာ (စင်္ကာပူ)
မှတ်ချက်။ ။ရှားပါးသော MP3 တရားတော်များ လိုအပ်ပါသဖြင့် ပေးပို့လိုပါက စာတိုက်မှဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်မှဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
သစ္စာပါရမီ ဓမ္မရာဇာ တရားရိပ်သာ (စင်္ကာပူ) > mp3 တရားတော်များ > သီတဂူဆရာတော်ကြီး
❖ သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၈ ခု၊ တပါင်းလပြည့်နေ့ (၁၉၃၇ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရိ ၂၃ရက်နေ့)၌ အဖ ဦးမောင်ညို၊ အမိ ဒေါ်သန်းတင်တို့က ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်မို့နယ် စီရင်စု၊ သဲကုန်းမြို့နယ် ပုတီးကုန်းမြို့တွင် ဖွားမြင်သည်။ အသက်(၇)နှစ်အရွယ်တွင် သဲကုန်းမြို့တပ် အလယ်တန်းကျောင်းတွင် စတင်ပညာသင်ကြားခဲ့။ အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ်တွင် ရှင်သာမဏေပြုခဲ့။
သက္ကရာဇ်-၁၃၁၈ – (သာသနာနှစ်-၂၅၀၀ ပြည့်နှစ်) နယုန်လဆန်း(၄)ရက်နေ့ အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ်တွင် သဲကုန်းမြို့၌ ရဟန်းပြု။ ရှင်သာမဏေပြုချိန်မှစ၍ ပိဋကတ် အခြေခံကျမ်းစာများကို သဲကုန်းမြို့တပ်အလယ်တန်း ကျောင်း ဆရာတော်ထံ၌ ပြည့်စုံအောင် သင်ကြားခဲ့သည်။
တရားတော်များ - သီတဂူဆရာတော်ကြီး
ဗုဒ္ဓ၊ ဓမ္မ၊ သံဃာ ရတနာ့ဂုဏ်ရည် တရားတော်များ
ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်း တရားတော်
‘က’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘က’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘က’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၃)
‘က’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၄)
‘က’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၅)
‘ခ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘ဂ,င’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘စ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘စ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘ဆ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘ဇ,ည’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘တ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘ထ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘ဒ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ
‘ဓ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘ဓ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘န’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘န’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘ပ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘ပ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘ပ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၃)
‘ဖ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ
‘ဗ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘ဗ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘မ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘မ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘မ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၃)
‘မ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၄)
‘မ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၅)
‘မ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၆)
‘ရ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘ရ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘လ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘လ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘၀’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘၀’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘၀’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၃)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၃)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၄)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၅)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၆)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၇)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၈)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၉)
‘သ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁၀)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၂)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၃)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၄)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၅)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၆)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၇)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၈)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၉)
‘အ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ အမှတ်(၁၀)
‘ဣ၊ သြ၊ ဥ၊ ဧ’ အက္ခရာစဉ် တရားတော်များ
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင် လေးသချေင်္နှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဆယ်ပါးဖြည့်ကျင့်တော်မူပြီး ခြောက်ကြိမ်တိုင် သံင်္ဂါယနာတင်ခဲ့သော ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားများ ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်မြတ်များကို အထူးစုစည်းကာ တင်ဆက်ပူဇော်ပါသည်။
သစ္စာပါရမီ ဓမ္မရာဇာ တရားရိပ်သာ (စင်္ကာပူ)
(60) West Coast Lane, Hong Leong Garden
(+65) 6524 6344, (+65) 8121 0493
© Copyright : 2014 - Thitsarparami Society. All Rights Reserved.
Designed by Nous Pte Ltd